Teny Fiainana ho anao ! Jao. 1:4b - Pastora RANDIMBISON Jacques Euloge Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Teny Fiainana ho anao ! (sady fiomanana amin’ny fampianarana any amin’ny Isantelovolan’ny Fileovantsika)
« ary hitanay ny Voninahiny, dia Voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana » Jao. 1: 14b.
Epifania, fanehoan’Andriamanitra ny Voninahiny! Inona moa izany hoe, « epifania » izany? Voambolana fampiasan’ny fanjakana Romana hilazàna ny fisandràtan’ny mpanjaka na [empereur] eo amin’ny seza fiandrianany sy fisehoany eo amin’ny vahoakany, ny hoe « epifania »; ambara ho fisehoan’ny famirapiratan’ny voninahiny sy ny fahefany izany. Aseho miaraka amin’izany fanandratana ny mpanjaka na « empereur » izany koa ny miara-mila manao matso (parade militaire), maneho ny heriny sy ny tanjany fa matanjaka izany fanjakana Romana izany! Nandaniana volabe sy nanaovana « démonstration de force », nentina hampihorohoroana ny vahoaka ihany koa aza izany.
Noraisin’ny fiangonana koa ny teny hoe, « epifania », hilazàny ny fankalazàn’ny kristiana ny Voninahitr’i Kristy izay nanehoan’Andriamanitra ny fanoloran-tenany feno fahasoavana ho antsika olombelona, mpanota, itondràny ny maha-Andriamanitra marina Azy, hanasitrana sy hamonjy antsika.
Tsy tonga nitratrevatreva, na nisetrasetra tahaka ny « empereur » , Andriamanitra, raha naneho ny Voninahiny hamonjy antsika. Nanaiky ho Zazakely, menavava, malemy nandry teo am-pihinanam-bilona ao amin’i Jesosy Izy, tamin’ny krismasy.
Tsy mpampihorohoro tahaka ny fanaon’ny manamboninahitra sy ny be galonan’ny tany no nidirany teto an-tany; anjely no nihoby sy nidera ny Voninahiny tamin’ny sasak’alin’ny nahatongavany teto an-tany nihira hoe, « Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra, ary fiadanana ho an’ny olona ankasitrahany. »
Niaraka tamin’ny fahazavana namirapiratra izany hiran’ny Anjely, Chorale Serafima sy Kerobima avy any an-danitra izany! Natahotra sy nihororohoro tokoa ny mpiandry ondry, saingy tsy nohararaotina izany fa teny mahatoky feno fahasoavana no setrin’izany nilaza hoe, « aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly ho anareo aho, Mpamonjy no teraka ho anareo anio, ao an-tanànan’i Davida… »
Tonga Jesosy Kristy hanafy antsika olony indray ny Voninahitr’Andriamanitra. Hamerina indray ny « endrik’Andriamanitra » tao amin’ny olona, very tamin’ny nanotàn’i Adama sy Eva; ravin’aviavy no nozairiny natakalony ny Voninahitr’Andriamanitra natafy azy.
Ny vonin’ny ahitra (1Pet. 1:24) no nasolony ny Voninahitra avy tamin’Andriamanitra.
Ny Voninahitr’Andriamanitra notafiany dia very ka, tsaroany fa mitanjaka izy, ka dia niery ny Tavan’Andriamanitra izy mivady (Gen. 3 :8-10). Tsy mahajery an’Andriamanitra intsony ny olombelona. Hay ve ka manao toy izany ny olombelona rehefa manota eo anatrehan’Andriamanitra ê?
Tsy ho zakan’i Mosesy ny hahita izany Voninahitr’Andriamanitra izany, na dia niady varotra te-hahita ny Voninahitr’Andriamanitra izy (Eksod. 33: 18), ka hoy Jehovah taminy, tao amin’ny tendrombohitr’i Sinay: « Tsy mahazo mahita ny tavako ianao; fa tsy misy olona mahita Ahy ka ho velona » (Eksod. 33: 20).
Toy izany koa i Isaia, tao amin’ny Tempoly dia tsy nahatanty ny hazavana nandrakotra azy tao amin’ny tempoly ka, niraparapa niteny tamin’ny tahotra hoe, « Lozako, maty aho!… » (Isa. 6: 5). Saoly sy ny miaramila niaraka taminy, raha nisetrasetra handringana sy hamono ny kristiana tany Damaskosy dia jambena ny masony, toy ny voan’ny « cataracte » ny voamasony anankiroa tsy nahatanty ny Voninahitr’i Kristy nisakana azy tsy hanao izany fikasan-dratsiny izany (Asa. 9: 1-19).
Tsy zakan’ny mason’ny mpanota ny hibanjina ny Voninahitr’Andriamanitra! Ny hazavàn’ny masoandro asan’ny Tànany aza efa tsy zakan’ny masontsika, mainka ve Izy nanao ny masoandro, ho zakanao ve ny hahita ny famirapiratan’ny Tavany ê!
« Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara Azy », hoy i Jesosy (Jao. 1: 18). Jesosy no famirapiratana, endrik’Andriamanitra azon’ny olona jerena, azon’ny mason’ny mpanota jerena, ifaneraserana, angatahana indray ny fiposahan’ny Voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mino.
Rehefa sitrana ny olona dia nisaotra sy nankalaza an’Andriamanitra. Izany koa no lazain’ny olona nahazo valim-bavaka avy amin’ny Tompo : »Misaotra Pastora, fa sitrana aho, misaotra Mpiandry fa niseho ny Voninahitr’Andriamanitra!…. »
Tsarovy fa efa nampitondrain’ny fiangonana ny « mariky ny hazo fijalian’i Kristy eo amin’ ny handrinao sy eo amin’ny tratranao teo amin’ny Batisa masina » ange ianao! Inona no dikan’izany? Efa voatafin’ny Voninahitr’Andriamanitra ianao ka tonga zanaka mandova ny fiainana mandrakizay; tsy ao anatin’ny listry ny mpanota intsony ianao noho izany!
Manala baraka an’Andriamanitra ianao raha mandainga, mangalatra, mamono olona; mampiboridana an’i Jesosy io ianao mpandray ny Fanasan’ny Tompo, nefa mijangajanga io! asa raha fantatrao izany? Asa raha mbola ataonao ny hampiroborobo izany faharatsiana sy fahotana izany amin’ity taona ity?
Tsy mino ny serasera misy eo amin’i Nenilava sy i Jesosy miresaka aminy ity vehivavy niavonavona, te-hialona an’i Mama Volahavana Germaine, niteny anakampò, hoe: « Vehivavy tahaka ity ve no miseho fa mahita sy miresaka amin’i Jesosy e? »
Nampahafantarin’i Jesosy an’i Mama izany ka hoy izy taminay rehetra tao amin’ny efitrano, « manontany antsika i Jesosy, fa ilazao ireo olona mivory eo aminao ireo fa hiseho amin’izy rehetra Aho! » Ramatoa Ratompo no nitalaho mafy hoe, « Mifona aho, Mama, fa tsy hahajery an’i Jesosy ny masoko! Mifona aho, Jesosy ô, fa tsy zakako ny hahita ny famirapiratan’ny Tàvanao! » Notohizan’i Mama tamin’ny vavaka sy fifonana izany mba tsy hampiavonavona azy koa, dia nirotsaka ny ranomasony!…
Ry havana, mpiavonavona sy mpiady voninahitra amin’ny tany ô! Sao dia manakona ny Tavan’Andriamanitra tsy ho hitanao ity « vonin’ny ahitra, mora malazo sy mihintsana ny voniny amin’ny tany ity! » hoy Petera (1Pet. 1:24); vonin’ny ahitra mihantona eo amin’ny tratran’akanjo sy ny sorok’akanjonao fa hoe, « manam-boninahitra ambony ianao? »
Te- hiady voninahitra amin’Andriamanitra amin’izany laharam-boninahitry ny tany mora rava izany ianao! Mivavaka sy mitory teny ianao fa, « ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra », nefa, dia eo imolotra ihany izany, fa miharihary eo anatrehan’ny olona ny fizahozahoana sy ny fanandrata tenanao amin’ny fisehosehoana, amin’ny fanambaniana ny olon-kafa tsy hitovy aminao, fa andrian-dahy sy andriam-bavin’ny tany hono ianao. Manakona ny Voninahitr’Andriamanitra izany ataonao izany!
– Toriteny Toby 238, Alarobia 4 Janoary 2017 –
Isaorana manokana an’i Pastora RANDIMBISON Jacques Euloge